Kutheni i-ArcGIS ivala yonke ihafu yesure - ii-Geofumadas
Kutheni i-ArcGIS ivala yonke ihafu yesixa
NgoJanuwari, 2008 ArcGIS-ESRI
Hayi, iyamangalisa impendulo yokuba abasebenzi be-ESRI basebenzayo kumbuzo othi kungani i-ArcGIS ne-ArcInfo zivame ukuvalwa
I-ID yeSihloko: 34262
Id Id: N / A
Iiplati: Windows XP
Xa i-browser ye-Opera efakwe kwinkqubo nge-ArcGIS, le nkqubo iphazamisa ukusebenza kwe-ArcGIS kwaye ibangela ukuba ivalwe ngokuchanekileyo
I-browser ye-Opera ayihambelani ne-ArcGIS.
I-browser ye-Opera kufuneka isuswe kwinkqubo yakho.
Ngenkxaso efana nale efuna iincwadi zokubhala :). Yintoni eyenzekayo kukuba bambalwa bethu basebenzisa i-Opera, kwaye akunandaba nokuba yisiphi isiphequluli esiyisebenzisayo ... kufuneka sifundise ukuhlala kunye namaconsi aqhubekayo kwenkqubo.
Utsho i graffiti:
«Haleluya, Ngomso i-ArcGIS yam yaphela kathathu»
Ngendlela: Ulungiso lwendawo
Post edlulileyo«Edlulileyo BlockCAD, ukusikhumbuza nge-Lego
Post Next Umvuzo wokuqala, umgangatho wamazwe ngamazweOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Kutheni i-ArcGIS ivala yonke ihafu yesure"
Ikhonkco ayiqhekekanga, bayisusa kuphela ngenxa yoxanduva.
UFabian Camargo uthi:
Inceba yokuba ikhonkco yempendulo ye-esri iphukile (ubuncinane namhlanje 15 kaJuni 2009).
Ndiyicinga ukuba nangona impendulo engabonakaliyo, akuqhelekanga ukuba oku kwenzeke njengenkqubo kwiplani yeMicrosoft, kungekhona kuphela i-ArcGIS enokuthi ihlupheke kwindlu apho ifakwe khona kunye nabamelwane abahlala nabo.
Emva koko, kukho ezinye iifayile ezitshintshiweyo zeLinux, kodwa kungekhona ngenxa yeLinux ... kunokuba ngenxa yeengxaki kwikhowudi yakho.
Ubuncinane kwimeko yam, ndive ngamanye amaxesha kunye iingxaki zengqondo ye java-mthetho kum ududuma isicelo usebenzisa enye inguqulo ye java nayiphi na inkqubo I nje ifakiwe ... kangangokuba kungabikho kuncedwa, Kakade ke, kodwa ngamanye amaxesha ukuba wena ingcaphephe java, inkxaso yobugcisa inokuba ally elungileyo.
ukuphakamisa isandla sakho (ukuba unayo) inkqubo yokungafihliyo ...
... awuyinkqubo "molo wehlabathi"